​‘झुक्याएर आफ्नै दिदी बेच्ने मेरो सालोलाई भलो नहोस्’ - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
​‘झुक्याएर आफ्नै दिदी बेच्ने मेरो सालोलाई भलो नहोस्’
काठमाडौं, पुस २८ । मेरी श्रीमतीलाई उनकै भाइले अवैधानिक रुपमा विदेश पठाए । त्यो पनि मसँग सल्लाहै नगरी । दुईचार पैसा कमाइने लोभ देखाएर बुढी भकी आफ्नै दिदीलाई पनि छाडेनन् ।
मेरी श्रीमती (पार्वती सुनार) अहिले त दूतावासमा आइपुगेकी छन् रे । बल्ल मन अलिकति भएपनि शान्त भएको छ । उनी दूतावासमा आइपुगेपनि मेरो मनमा दन्केको आगो भने पटक्कै निभेको छैन । मेरो सालोले खै सेतै कपाल फूलेकी बुढीले के कमाउँछे भनेर विदेश पठाए होलान् ? मेरो मनमा यही कुरा खेलिरहन्छ ।
म छोराबुहारी भेट्न काठमाडौं आएको थिएँ । श्रीमती घरमै थिइन् । मलाई कान्छो छोराले नै भने ‘बुवा आमा पनि काठमाडौं आउनुभएको छ रे’ मत छक्क परे । फोन गरेर सोधे भाइसँग पशुपति दर्शन गर्न आएको भनिन् ।
होला भन्ठानेँ । तर त्यसको भोलिपल्टै विदेश पठाएछन् । कहिले पासपोर्ट बनाए, कसरी पठाए मलाई त थाहै छैन । मेरो श्रीमती ४६ वर्ष लागिन् । ३ जना त नानिनातीना छन् । त्यसमाथि ऊ बिरामी पनि छिन् ।
गएको साउनमा लडेर उसको अप्रेशन गरेको छ । माइतबाट फर्किदा बाटोमा लडिछ । बाटो अलिक अप्ठेरो थियो । रातभरी खोज्दा पनि भेटिएन् । भोलीपल्टमात्रै उठेर आइछन् । मैले धुलिखेल अस्पताल ल्याएँ । कलेजो फोक्सोको अपरेसन गरेको । हात पनि भाँचिएको छ ।
घरको काम त गर्ने नसक्ने दिदीलाई आफ्नै भाइ रामकृष्णले के सोचेर कुवेत पठाए होलान् । दिदीको अनुहार देख्दा अलिकति माया लाग्नुपर्ने हो नि । कंलकीबाट गाडीमा दिल्ली लगेछन् । दिल्लीबाट कुवेतमा पुर्याएका हुन रे ।
कुवेतमा घरको काममा रातदिन नभनेर गर्नुपर्ने । त्यसमाथिपनि साहुले कुटपिट गरेर मारुँला झै गर्छन भनेर फोनमा रोइन् । त्यो घरमा उनले कसरी काम गरिन् होला ?
यहाँ घरमा खाना पकाउन नसक्दा म आफैंले पकाएर खुवाउँथे । त्यस्तो मान्छेले बेकारमा पराइ देशको मान्छेको कुटाइखान प¥यो । भाइले घरमा आएर फकाएर पठाएछन् । मलाई पनि ढाँट्न लगाए । पछि दुःख पाएपछि मात्रै पो भनिन् ।
बुढेशकालमा उनले उता दुःख पाइन् । मेरो यता उस्तै हाल छ । श्रीमती त्यसरी विदेश पुगेको थाहा पाएदेखि मलाई घरमा बस्न मन लाग्दैन । म त कहाँ जान्छु कहाँ खान्छु मलाई नै थाहाँ हुँदैन । धेरैदिन त रुख मुनी सुते ।
दिदीको छोरो मानेले पो दिल्ली र्पुयाएको रहेछ । बल्ल पो थाहा पाउँदै छु । सालोलाई निकालिदेउ छिटो किन त्यसो गरेको भन्दा मलाई र मेरो छोराहरुलाई पनि मारिदिन्छु भन्छन । सालोले त मलाई कुट्यो पनि ।
एकचोटी फोनमा कुरा हुँदा मेरो जीन्दगी त खत्तम भयो । मलाई त कहाँ लगे कहाँ भनेर रोएकी थिइन् । न उसलाई फोन गर्न आउँछ न उठाउन । काम गरी खाने मलाई आफन्तले नै बिजोग बनाइदिए ।
मलाई साह्रै टेनसन भएको छ । म त पागल जस्तै भइसकेँ । बुढेसकालमा अनेक आइलाग्यो । पावर्ती चाँडै घर आए हुने थियो । मलाई झुक्याएर आफ्नै दिदीबेच्ने मेरो सालोलाई भलो नहोस् ।
रीना श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित ।